साझा र विवेकशीलबीच फेरि एकता प्रयास – अभियान पोष्ट
पोखरा । फुटको डेढ वर्षपछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल फेरि एकता गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
आचार्य र खनाललाई धन्यवाद
आइतबार बसेको साझा पार्टीको बैठकले डा. आचार्य र खनाललाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । दुबै पार्टीमा असन्तुष्ट थिए र शनिबार बसेको सचिवालय तथा आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिकोे बैठकमा सहभागी भएनन् ।
स्रोतका अनुसार लुम्बिनी भेलामा फरक मत राखेका खनाल र आचार्यले पार्टीको संरचना भत्काएर संयोजक मात्र राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर पार्टी नेतृत्व अहिलेको संरचना कायम राख्दै एकता गर्दै जाने पक्षमा उभिएपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । दुबै पार्टी संरचनामा नबस्ने सम्भावना छ ।
प्रवक्ता डा. आचार्यले भने पार्टी संयोजक मिश्रसँग सल्लाह गरेर नै बैठकमा नगएको बताए । ‘पार्टीमा केही पेचिलो बहस भइरहेको सत्य हो तर हामी वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्देश्यबाट विचलित भएका छैनौं’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीको संरचनामा नै रहने कि बाहिर बस्ने भन्ने फरक हुनसक्छ ।’